Nei yangu iPhone Ichiramba Yotangazve? Heino Kugadzirisa! - Iphone
akatsemura yangu iphone 7 chidzitiro
fitbit isingawirirane ne iphone 7
foni isiri kutumira mameseji emifananidzo
Nei yangu iPhone ichiramba ichitangazve, uye chii chandinoita nezvazvo? Isu tinovimba maPhones edu uye ivo vanofanirwa kushanda zvese nguva. Zvingave zvakanaka kana paine chikonzero chimwe chete nei maPhones anotangazve kakawanda, asi hapana mashiripiti bara redambudziko iri. Muchikamu chino, ini ndichatsanangura chii chinokonzera iPhones kuramba ichitangazve uye ndichakuratidza maitiro ekugadzirisa iyo kutangazve iPhone dambudziko .
Chengetedza varidzi ve iPhone X: Kana iwe uine iPhone X kana iPhone XS inoramba ichitangazve, ndapota verenga chinyorwa changu chitsva kuti uzive maitiro ekumisa yako iPhone X kubva kutangisazve kakawanda . Kana izvo zvigadziriso zvikasashanda, dzoka uteedzere iri gwaro.
Nei yangu iPhone Ichiramba Yotangazve?
iPhones dzinoramba dzichitangazve kazhinji dzinowira mumapoka maviri:
iPhones dzinotangazve nepakati: Unogona kushandisa iPhone yako kwechinguva pasina dambudziko zvachose, uye ipapo wako iPhone pakarepo restarts.
iPhone inotangazve loop: IPhone yako inoenderera ichitangazve uye haina basa zvachose. Iyo Apple logo inoonekwa uye inonyangarika pachiratidziri, kakawanda uye zvakare.
Kana yako iPhone ikawira muchikamu chechipiri, ramba uchienda padanho 5. Hazvigoneke kuita matanho ekutanga mashoma kana iwe usingakwanise kushandisa software pane yako iPhone. Ngatinyurirei mukati, kuti ugone kumira kushevedzera 'My iPhone inoramba ichitangazve!' pane kati.
Tisati taita chero kunetseka zvachose, ita shuwa kuti yako iPhone yakatsigirwa. Kana yako iPhone iine dambudziko rehardware, uyu unogona kunge uri mukana wako wekupedzisira kutsigira data rako. Kana tichida, tichadzorera yako iPhone mune inotevera nhanho, uye unoda backup usati wadzorera.
Kana uchida batsira kutsigira yako iPhone , Chinyorwa chekutsigira chaApple chine kufamba kwakanakisa. Kamwe iwe unotsigirwa, iwe unenge wakagadzirira kutanga kugadzirisa dambudziko kana yako iPhone ikaramba ichitangazve kana kana yako iPhone ichiramba ichitenderera uye ichivhara.
2. Ongorora Yako iPhone's Software (iOS)
Kunge Windows pane PC kana OS X pane Mac, iOS ndiyo yako iPhone's operating system. IOS inogadziridza inogara iine yakawanda yekugadzirisa yesoftware bugs uye mamwe matambudziko. Dzimwe nguva, software yekugadzirisa inogadzirisa dambudziko riri kukonzera kuti yako iPhone irambe ichitangazve kana kupinda mukutangazve loop.
Kuti utarise kana paine zvigadzirwa zve software zviripo, enda ku Zvirongwa -> General -> Software Kwidziridzo . Kana inogadziridza iripo, isai iyo. Iwe unogona zvakare kubatanidza yako iPhone kune komputa yako uye shandisa iTunes kugadzirisa yako iPhone's software. Kana yako iPhone iri kuramba ichitangazve, iTunes inogona kunge iri yako yepamusoro kubheja.
3. Sarudza Kana Iyo App Iri Kukonzera Yako iPhone Kuti itangezve
Izvo zvisingawanzoitika kuti app iite kuti iPhone itangezve kana kubatidza uye kudzima kakawanda. Kune chikamu chikuru, iyo software pane yako iPhone inodzivirirwa kubva kumatambudziko maapplication. Izvo zviri kutaurwa, kune anopfuura 1.5 mamirioni maapplication muApp Store uye iwo haasi ese akakwana.
Kana iwe ukaisa Anwendung nguva iyo yako iPhone isati yapinda inotangazve chiuno, bvisa iyo app uye uone kana dambudziko razvigadzirisa pacharo.
Zvirongwa -> Zvakavanzika -> Analytics -> Analytics Dhata ndiyo imwe nzvimbo yekutarisa matambudziko maapp. Zvakajairika kuona zvakati wandei mune izvi zvinyorwa. Kurumidza pfuura nepakati pechinyorwa uye tsvaga chero maapplication akanyorwa kakawanda. Kana iwe ukawana imwe, uninstalling iyo app inogona kugadzirisa yako iPhone.
4. Dzorera Zvese Zvirongwa
Dzorerazve Zvese Zvirongwa haisi magic bullet, asi inogona kugadzirisa dzimwe nyaya dze software. Enda ku Zvirongwa -> General -> Seta -> Seta Zvese Zvirongwa kudzoreredza yako iPhone's masetera kune fekitori zvisipo. Haungarasikirwe nechero maapplication kana data, asi uchafanirwa kuisa password yako yeWi-Fi zvakare.
5. Bvisa SIM Kadhi Rako
iPhone restart zvishwe zvinogona kukonzerwa nenyaya ne iPhone yako kubatana kune yako isina waya inotakura. Yako SIM kadhi inobatanidza yako iPhone kune yako isina waya inotakura, saka kuibvisa ndiyo yakanakisa nzira yekugadzirisa matambudziko apo yako iPhone inoramba ichitangazve.
Usatombo kunetseka: Hapana chinogona kutadza kana iwe ukabvisa yako SIM kadhi. Yako iPhone inozobva yabatanidzazve kune anotakura iwe nekukurumidza kana iwe uchinge waidzorera mukati.
ona nyaya yangu mukutama
Chinyorwa cheApple chekutsigira nezve sei kubvisa SIM kadhi kubva kune yako iPhone ichakuratidza chaizvo panowanikwa SIM kadhi pane yako iPhone. Iwe unozoshandisa pepa clip kukanda iyo SIM tireyi kubva kune yako iPhone.
Kana ukabvisa yako SIM kadhi inogadzirisa dambudziko, dzosera iyo SIM kadhi zvakare mu iPhone yako. Kana dambudziko rikadzoka mushure mekunge waisa yako SIM kadhi mukati, iwe unofanirwa kudzoreredza yako iPhone (nhanho 7) kana kutsiva iyo SIM kadhi nemutakuri wako.
Kana kubvisa SIM kadhi hakugadzirise dambudziko, usaise yako SIM kadhi mukati kusvikira wapedza rinotevera danho. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda nezve yako SIM kadhi SIM, tarisa chinyorwa changu chinonzi 'Sei iPhone Yangu Isiti Hapana SIM Kadhi?' .
6. Zvakaoma Reset
Iwe haufanire kuita kuomarara patsva pane yako iPhone kunze kwekunge zvichinyatso kudikanwa. Iyo yakaita sekudzima komputa yedesktop nekuiburitsa kubva pamadziro. Izvo zviri kutaurwa, iyo iPhone inotangazve chiuno ndeimwe yenguva idzo uko kuomarara patsva kunofanirwa.
Kuti uite yakaoma reset, bata iyo bhatani remagetsi uye Bhatani repamba (iro bhatani rakatenderera pazasi pechidzitiro) panguva imwechete kusvikira yako iPhone skrini yasara uye logo yeApple yaonekazve.
Pane iyo iPhone 7 kana 7 Plus, mabhatani aunoda kudzvanya kuita akaomarara reset akasiyana zvishoma. Panguva imwe chete bata uye bata iyo bhatani remagetsi uye iyo vhoriyamu pasi bhatani.
Kana iwe uine iyo iPhone 8, 8 Plus, kana X, maitiro ekuomesa resetting akasiyana zvakare. Dhinda uye usunungure iyo vhoriyamu kumusoro bhatani , ipapo iyo vhoriyamu pasi bhatani , ipapo Dhinda uye ubatisise bhatani repadivi .
Pasinei nemhando ipi ye iPhone iwe unayo, ita shuwa iwe bata mabhatani maviri pasi pamwe chete kweanenge makumi maviri masekondi . Vanhu vakashamisika kana vaipinda muApple Chitoro uye ini ndaikurumidza kugadzirisa yavo yakafa iPhone neyakaomarara reset. Ivo kufunga vakaita reset rakaoma kumba, asi havana kubata mabhatani ese pasi kwenguva yakareba yakakwana.
Kana iwe ukabvisa SIM kadhi kubva kune yako iPhone mune yakapfuura nhanho, ikozvino inguva yakanaka kuidzosera mu iPhone yako. Isu tabvisa mukana wekuti yako SIM kadhi iri kukonzera kuti yako iPhone itangezve. Tinovimba zvakaoma Reset achagadzirisa dambudziko apo iPhone wako akaramba restarting, asi kana zvikaramba, uchava itangezve mudziyo wako nekutevera mirairo pazasi.
7. Dzoserai iPhone Yako Uchishandisa iTunes
Kudzoreredza yako iPhone inodzima zvachose uye kuisazve iyo software ye iPhone (iOS), uye inogona kubvisa kuurayiwa kwesoftware nyaya panguva imwe chete. Kana isu tikadzorera yako iPhone, isu ticha bvisa mukana wekuti software inyaya inogona kunge ichikonzera kuti yako iPhone itangezve - ndosaka Apple techs ichizviita kazhinji.
IPhone yako inoda kuve yakabatana necomputer yekudzorera. Ini ndinokurudzira kuita yakakosha mhando yekudzoreredza iyo Apple techs inoita inonzi a DFU Dzosera , inoenda zvakadzika kupfuura yakajairwa kudzoreredza uye inogona kugadzirisa mamwe matambudziko. Iwe hausi kuzoiwana chero kupi zvako pawebhusaiti yeApple - verenga chinyorwa changu kuti udzidze sei DFU kudzorera iPhone wako .
Mushure mekudzoreredza kwapera, iwe unozogona kurodha zvakare rako rese ruzivo kubva kune yako iPhone backup mu iTunes kana iCloud. Kana uchine dambudziko, dzoka pano uye ramba uchiverenga.
8. Tarisa A Hardware Dambudziko
Matambudziko e Hardware chikonzero chakajairika nei maPhones akanamira mukutangazve chiuno. Kana iwe uri kushandisa kesi pane yako iPhone, bvisa usati waenderera.
Tarisa tarisa padoko rekuchaja pazasi pe iPhone yako. Tarisa uone kana paine chero marara akanamira mukati uye nezviratidzo zvengura.
Kana chimwe chinhu chisiri kutaridzika zvakanaka, tora bhurasho remazino iwe rausina kumboshandisa uye zvinyoro nyoro puraji yekuchaja. Dunhu pfupi kana rimwe dambudziko mukati mechaji yekuchaja inogona kukonzera matambudziko ese ne iPhone yako.
chitoro cheapp hachizotakure mac
9. Ungangoda Kugadzirisa Yako iPhone
Isu tabvisa mukana wekuti software inyureyi iri kukonzera kuti yako iPhone irambe ichitangazve uye tarisa nyaya dzehardware kunze kweiyo iPhone yako. Kana yako iPhone iri mukutangazve chiuno, yako iPhone ingangoda inoda kugadziriswa.
Kana iwe ukasarudza kuwana rubatsiro kuApple Store yako, ita shuwa kuti une musangano neGenius Bar saka haufanire kumirira uchitenderera. Imwe nzira isingadhuri ndeye Pulse , tsamba-mukugadzirisa basa rinoita basa rakakura.
Panguva ino, ndinotarisira kuti tagadzirisa dambudziko rakakonzera kuti iPhone yako irambe ichitangazve. Ndinoda kunzwa ruzivo rwako muchikamu chemashoko pazasi, uye kana uine chero mimwe mibvunzo, inzwa wakasununguka kuvabvunza mu Payette Pamberi Facebook Boka.